Articles - Nabad iyo Nolol
Waxaan in yar oo kooban kaga hadlayaa maqaalkan arimo ay ka hadleen wax garadka qiimaha badan ee Soomaaliland oo la xariirta dhaqan xumo lagu soo dhex qariyay dhaqanka suuban ee soomaaliyeed. Waxaan idinla wadaagayaa in ay jiraan caalamka siyaabo farabadan oo dad iyo dal loo guumaysto,waxaa kamid ah tusaale in dal lagu soo duulo oo si xoog ah lagu qabsado,sidoo kale in...
Arrin yaab iyo farxad leh ayaa ka dhacday gobolka Andhra Pradesh oo ku yaalla Koofurta dalka Hindiya ka markii haweeneey 73 sano jir ah ay ku dhashay labo gabdhood oo mataano ah. HOOS KA DAAWO WARBIXINTA: The post YAAB+FARXAD: Haweeney 73 jir ah oo u mushay ilmahadeedii ugu horeeyay appeared first on Allgalgaduud.Com. ...
Waxaa illaahay siiyaa adoomadiisa kuu doono cizi iyo karaamo una dhaliyaa isaga gobonimo iyo shaqsiyad fiican oo saraysa. Hadii qof illaahay karaameeyo oo uu kaa nasabad iyo sharafba badan yahay oo aadan arinkaa illaahay bixiyay sidaa u fahmin,laba qodob ayaa laga dhaxlaa oo kala ah sidan hoos ku xusan. 1.CUQDAD IYO DULINIMO ADUUNKA KORKIISA AH 2.CADAAB AAKHIRO Dalkeenu...
Sida ilmaha dhashay ay u maraan maraaxil koritaan oo is xigxiga (developmental stages) sida dhabacasho, xamaarasho, guurguurasho, socod iyo orod ayay wax walba oo biloow lihi u maraan maraaxishaa illaa ay ka qaan-gaaraan ama ka bislaadaan. Soomaalidu marbay ahayd dimuqraadiyadda ugu magaca dheer qaaradda Africa. Waxannu haysannay dimuqraadiyad curdan ah oo ay hoggaaminayeen...
Waxaan halkaan hoose idiin kugu soo gudbinaya barnaamij kooban oo ka hadlaya howshii quruxda badneyd ee Ra’isal Wasaare Kheyre ka soo qabtay degaanada Galmudug. HOOS KA DAAWO MUUQAALKA LAGA DIYAARIYAY: The post DAAWO MUUQAAL XIISA LEH: Kheyre guul mise guul daro safarkii Galmudug appeared first on Allgalgaduud.Com. ...
Golaha amaanka ayaa shir dagdag ah oo ay galeen kasoo saaray go aano iyo fulin awaamiir ku qotanta shuruucda u dagsan jamciyada quruumaha ka dhaxaysa.Kulankan oo ahaa mid ku khaas ahaa dalka soomaaliyeed ayaa diirada lagu saaray xaalada nabad galyo iyo dhaqaale halka uu maraayo maanta. Nasiib wanaag waa markii koobaad tan iyo intii aynu burburay 1991dii in golaha amaanku...
Alla Ha’unaxariistee Hodon Naalaye intaan ka bartay, waxay marwalbo ka sheekeyn jirtay sida ay u jeceshahay inay dalkeeda wax uga bedesho, waxayna aad ugu dadaali jirtay hirgelinta fekradaha ay u aragto in ay waxbedeli karaan. Maalmihii ay bilowday Barnaamijkeedii caanbaxay ee IntegrationTv ayaan anigoo ka shaqeynayey...
Kontonkii sano ee la soo dhaafay, waxaa dunida aad ugu soo kordhay dadka heysta labo dhalasho iyo ka badan iyadoo loo aanaynayo sababo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin colaadaha iyo dhaqaala xumida ka jira qeybo badan oo dunida ka mid ah sida Afrika. Tusaale, waddankeena markii ay dawladda burburtay dagaallada sookeeyane ay ka qarxeen meel walba oo waddanka ka mid ah,...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa halyeey qaran ku noqday talaabooyinkii ay qaaday dowladda Kenya. Guud ahaan warbaahinta dalka Kenya ayaa aad u hadal heysa fal celinta wanaagsan iyo go’aanada degan ee ka soo baxaya xafiisyada dowladda Soomaaliya. HOOS KA DAAWO WARBIXINTA HALYEEY QARAN MADAXWEYNE FARMAAJO: The post...
Waxaad arkaysaa dad badan oo la yaaban Mucaaradka hadda jra intooda badan sida ay rabaan in ay xukunka dalka ku qabtaan inaysan haba yaraatee aheyn si ay xukunka dalka ku hanana karaan amaba aan dhaho ugu soo dhawaan karaan qabasho iska daaye. Hadaba waxaa isweydiin mudan nimankaas Siyaasiyiinta sheeganayaa intaas ma garan karaan miyaa, maya wey garan karaan waana naga...